စာခြောက်ရုပ်အပြုံး – Pann Satt Lann Books
ဤစာခြောက်ရုပ်အပြုံးစာအုပ်တွင် စာရေးဆရာမ နိုင်းနိုင်းစနေသည် လူတို့၏ စိတ်နေသဘောထား၊ အကျင့်စရိုက်၊ ဓလေ့ထုံးစံများကို ရိုးရှင်းပွင့်လင်းစွာ ရေးသားတင်ပြထားသည့်အတွက် စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးအနေဖြင့် ကြိုက်နှစ်သက်ကြပါလိမ့်မည်။
ဤစာအုပ်တွင် ဒီလိုဘ၀မျိုး၌ အင်္ကျီဗလာ၊ ဘောင်းဘီတိုနှင့် ခြေဗလာကျင်း အဘိုးအိုသည် အခကြေးငွေမယူဘဲဲ လမ်းတိုင်းကို တံမြက်စည်းသေးတစ်ချောင်းနှင့် ဖုန်များကို အရင်လှည်းသည်။ ထို့နောက် အဝတ်စတစ်စဖြင့် အားကုန်ပွတ်တိုက်သည်မှာ သန့်ရှင်းလွန်းသဖြင့် ဖိနပ်ပင်စီးစရာမလိုသည်ကို ဆမ်မောက်က နေ့စဉ် တွေ့မြင်နေရ၍ အဘိုးအို၏ စိတ်ထားကို လေးစားမိပုံ၊ ပလတ်စတစ်ကလေးသူငယ်၌ ကလေးငယ်များသည် သူတို့၏ငယ်ဘ၀တွင် အိမ်စာ၊ ကျောင်းစာ၊ ကျောင်းကားတိုးစီး၊ ကျူရှင်တက်၊ အားလပ်ချိန် နည်းနည်းရလျှင် တီဗွီကြည့်၊ ကာတွန်းစာအုပ်ဖတ်နှင့် အချိန်များကုန်စေသည်ဟု ဖော်ပြထားရာ ကလေးငယ်များ၏ ဘ၀ကို စာနာသနားမိပုံ၊ မြင့်မားကြီးမြတ်သူ၌ ၁၂ နှစ်သားကလေး ဒန်နီရယ်က သူ၏မွေးစားမိခင် သေဆုံးနေသည်ကို တစ်ညလုံး တစ်ယောက်ထည်း ထိုင်စောင့်နေခဲ့သည်။ ထို့နောက် မိခင်၏နာရေးကို စီစဉ်နေချိန်မှာလည်း မွေးစားဖခင်၏ ကျန်းမာရေးကို အထူးဂရုစိုက်ခဲ့သဖြင့် မိဘအရင်းများကဲ့သို့ ချစ်ခင်ခဲ့သည်။ ဒန်နီရယ်ကို ဆမ်မောက်က မြင့်မားကြီးမြတ်သူဟု တင်စားခေါ်ဝေါ်ခဲ့ပုံ၊ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် ခုနှစ်ကျွန်းခရီးစဉ်တွင် စပိန်နိုင်ငံ၏ ကနေရီကျွန်းစုရှိ La Gomera ကျွန်းသူကျွန်းသားများသည် ထူးခြားသော ကိုယ်ပိုင်လေချွန်သံဖြင့် အချက်ပေးနိုင်သည်။ လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ပါးစပ်ကို ကိုင်လိုက်ပြီး ရွှေရောင်စာကလေးကဲ့သို့ သာယာနာပျော်ဖွယ်ကောင်းသောအသံဖြင့် လေချွန်နိုင်သည်။ ရပ်ပါဟု လေချွန်လျှင် ရင်ပြင်ကို ပြတ်ပြီး တစ်ဖက်လူနားရောက်သွားပြီး ထိုသူက ထရပ်သည်။ ကပါဟု လေချွန်လျှင် ငှက်စကားသံကဲ့သို့ကြားသော် တစ်ဖက်လူက ကသည့်ဟန်ပြုသည်ဆိုသည့်အတွက် စာဖတ်သူတို့အား ဗဟုသုရစေပါသည်။
စာရေးဆရာမ နိုင်းနိုင်းစနေသည် ယခင်ရေးသားခဲ့သည့် စာပေပရိတ်သတ်များ အထူးကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့ကြသော စိတ်ခွန်အားဖြစ်စေမည့် စာအုပ်များနှင့်မတူဘဲ ဤစာခြောက်ရုပ်အပြုံးစာအုပ်ကို တစ်မူထူးခြားစွာ ရေးသားထားပါသည်။ ဤစာအုပ်တွင် အပုဒ်ရေ ၂၀ ပါဝင်ပြီး စာစုတိုင်းတွင် လူတို့၏နေထိုင်မှု၊ စိတ်နေသဘောထား၊ ယဉ်ကျေးမှုတို့ကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ဖော်ပြထားသဖြင့် စာဖတ်ပရိတ်သတ်အနေဖြင့် ဖတ်ရကျိုးနပ်ပါလိမ့်မည်။ ထိုစာစုများတွင်လည်း ရသမျိုးစုံကို ပေးထားသဖြင့် စာဖတ်ပရိတ်သတ်အနေဖြင့် ဗဟုသုများစွာ ရရှိမည်ဟု ယုံကြည်မိပါသည်။
5 × 1.5 × 7.5 inches
SYNERGY Publications စာပေ၊ 2021 အောက်တိုဘာလ၊ (ပ-ကြိမ်)
စာခြောက်ရုပ်အပြုံး အား ဝေဖန်သုံးသပ်မှု2ရှိပါသည်။
ဒီစာအုပ်က ဆရာမနိုင်းနိုင်းစနေ ကိုယ်တိုင်ရေးသားထားခြသ်းမဟုတ်ပါ. ဘာသာပြန်ထားခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်. အပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့ စာအမြည်းမှာ ဆရာမကိုယ်တိုင် ရေးသားထားတယ်လိူ့ ဖော်ပြချက်ဟာ မှားယွင်းနေပါတယ်ရှင့်.
Myomyo (verified owner) – October 14, 2021
ဆယ်မောက်ပရိတ်သတ်တွေအတွက်တော့ နိုင်းနိုင်းစနေရဲ့ အကောင်းဆုံးဘာသာပြန်စာအုပ်ပါ